Rudzi: chimiro uye kunaka
Mamwe mapaundi idambudziko remazuva ano iro rinobata huwandu hwenyika. Kune huwandu hukuru hwese nzira dzese dzaunogona kuyedza kubvisa dambudziko iri, iri pamusoro pavo uye ...
Sezvineiwo, kazhinji nechirimo, vakadzi (uye varume vazhinji) vanorangarira kuti ivo vanoda kudzikira uremu! Ichi chishuwo chakabatana neinowedzera uye nekushingairira kupenya kwezuva, kuchinjisa wadhirobhuu yechando kune iyo yakareruka ...
Imwe yedzakanakisa nzira dzekudzora huremu ndiyo nzira yaDr. Gavrilov. Kurera uremu chirongwa kunosanganisira akati wandei matanho. Gadzira nenzira kwayo zvepfungwa kuti ubvise huremu hwakawandisa, uone zvikonzero zvepfungwa zvekudya zvakanyanya; Dzidza ku…
Maitiro ekuchenesa pendende yegoridhe - nhanhatu nzira
Ndarama isimbi yakanaka, inodhura, asi nekufamba kwenguva inogona zvakare kurasikirwa kwayo kwekutanga kupenya uye kupenya. Zvishongo zvegoridhe - pendende uye pendende - zvinosviba uye zvakasviba, zvakafukidzwa negirizi yekupfeka. Them…
Vazhinji vanokakavara nezve izvo zvinonzi vhiniga chikafu, kana zvichiratidzwa kunwa apple cider vhiniga neuchi hwekureruka. Tichaedza kubvisa kusava nechokwadi kwako uye nekutsanangura kuti nei chinwiwa chakanyatsogadzirirwa chinyatsoshanda, ...
Hoodies yevakadzi: foto, tsananguro. Kupfeka hoodie
Izwi rekuti "hoodie" harisi mudzi mumwechete unemazwi "kuonda" uye "kuonda". Kunyangwe nesarudzo chaiyo, chero mbatya dzinogona kuve dzakatetepa. Muchokwadi, zvinobva kuChirungu hood - "hood". Hoodies yevakadzi ...
Swiss tarisa Panerai: mapikicha, ongororo
Giovanni Panerai akavhura shopu yake yekutanga muFlorence muna 1860. Ipapo iye zvakadaro aisatarisira kuti vachakunda rudo rwakadai uye budiriro kwete muItari chete, asi ...
Shangu dzakakurumbira "Mifer", yakatarisana grid kubva kumugadziri
Chiratidzo cheMifer chinomiririrwa nehukuru hwakakura hweshangu dzevana. Iyo kambani yakavambwa muna2009. Munguva yese yekuvapo kwayo, inova makore masere, iyo yekutengesa yakwanisa kukunda chikamu chakakosha chemusika weRussia. Zvese…
DIY zvipo zveZuva reMudzidzisi. Pfungwa dzekusika, tenzi tenzi
Tsika yekukorokotedza vadzidzisi pazororo ravo rezvemhizha yakavapo kwenguva yakareba. Uye pese pese vadzidzi nevabereki vavo pavanotarisana nemubvunzo wezvekupa. Maruva uye zvihwitsi zvinoonekwa nevazhinji kunge banal ...
Askalini shangu. Nezve iyo mhando uye chigadzirwa renji
Chero mufananidzo haugone kutariswa wakakwana kana pasina shangu dzakakodzera. Kunyangwe newadhiropu inoenderana, chitarisiko hachizowirirana kana shangu kana bhutsu zvisingaenderane nemufananidzo wese ...
Pasi jaketi "Lamide": wongororo, mitengo, yakaenzana grid
Yemazuva ano yechando pasi majaketi mubatanidzwa werunako uye hunoshanda. Izvo hazvisi zvechinhu kuti ivo vave vakasimba kwazvo kushandiswa neanenge munhu wese anomanikidzwa kuzvidzivirira kubva kuchando. Pasi jaketi "Lamide", wongororo dzayo ...
Vheti yevakadzi ndiyo mamiriro azvino emwaka!
Vheti yevakadzi chipfeko chakachinjika. Chero ani zvake ane chinhu chakadaro muwadhiropu yake anogona kusafunga nezvekupfeka. Vheti yevakadzi inoenderera mberi iri panhongonya yemukurumbira haisisiri ...
Kutengesa network Tezenis. Zvitoro muMoscow
Mukunzwisisa kwevatengi vazhinji "Tezenis" chitoro chemukati. Ichi hachisi chimwe chinhu kunze kwekukanganisa kwakajairika. Muchokwadi, "Tezenis" chiratidzo chepasirese, zvinoreva kwete zvipfeko zvemukati chete, asi ...
Mhete dzegoridhe dzine rubhi (foto)
MaCortesans, madzimai epasi-epasi, machinda eropa, madzimambo, mabhirionea eOld and New Worlds, Hollywood nyeredzi - ivo vese vaida mabwe anokosha nechishuwo: madhaimani asina ruvara uye ane mavara, emeralds, safire, rubhi nemaparera ...
Ice dhiraivha yeshangu: ongororo, mafambiro ekufamba uye mhando
Nguva yechando yasvika, iyo nguva yekushongedza kweGore Idzva, mwenje inodziya yerudo, mazaya echando anodonha kubva kudenga. Nekudaro, munguva pfupi iri kutevera ngano inoshanduka isiri iro rinonyanya kunakidza divi: nekuda kwekudonha kwetembiricha, migwagwa inoshanduka, kutaura chaiko, ...
Dhayi yevhudzi yebvudzi dema: vagadziri, pendi
Zvingaita sekuti vatema-vhudzi runako zviri nyore kwazvo kuzvitarisira kupfuura blondes. Rima dhayi rinokanganisa bvudzi zvishoma, rakakura pamidzi harioneke zvakanyanya, uye kusarudza mumvuri wakakodzera zviri nyore kwazvo. Handizvo here…
Nzira dzekudzosera bvudzi kumba. Mushonga wakanakisa wekudzosera bvudzi
Rakanaka bvudzi ndiro kurota kwemusikana wese, asi dhizaini yega haisi nguva dzose yakakwana kuzadzisa chinangwa. Kuti mac curls arambe achipenya uye akasviba, vanoda kutarisirwa kwakakodzera. Ndezvipi zvakanakisa ...
Pakati pemishonga yakawanda inoshandiswa mukurapa kwezvipfuyo, pamwe imwe yeakakurumbira ndeye Zorka kirimu. Nei uyu mushonga wemhuka wakave wakakurumbira pakati pevanhu zvakare? Kutanga, zvishoma nezve ayo pharmacological ...
Musoro mannequin yevhudzi. Nzira yekusarudza iyo chaiyo?
Musoro webvudzi mannequin musoro chishandiso chevashandi vevhudzi veese hunyanzvi mazinga. Vatangi vanokwanisa kudzidza pazviri, kuita chero magadzirirwo ebvudzi, dhizaini, uye masters ehunyanzvi hwavo - kuyedza uye nekuuya neitsva vasingatyi ...
Keratin mask yevhudzi: wongororo, mitengo
Vamwe vanorota bvudzi rakatwasuka, vamwe - vemakora, uye mumwe munhu anotambudzwa neiyo "yekugadzira" yakasviba mumusoro uye yakashata curls. Vazhinji vangangodaro vakanzwa kuti kune kururamisa keratin mask ye ...
Mibvunzo ye57 mu database yakagadzirwa mu 1,709 masekondi.